Chicken Scream, ny lalao akoho fehezin'ny feonao ary mamely azy amin'ny Android | Androidsis
Amin'ity indray mitoraka ity aho dia mitondra lahatsoratra somary hafa ianao, ary izany dia, na dia mitondra lahatsoratra video anao aza aho lalao androidTsy misy ifandraisany amin'ny lalao efa zatra nilalao tamin'ny rafitra fiasa Android maitso ity. Ny maha samy hafa an'ity lalao ity dia raha ny fahaizany milalao ihany, fa manana hype tsy mampino amin'ireo tambajotran-tserasera sy haino aman-jery manokana eto amin'ny tontolon'ny Android.
Antsoina ny lalao Akoho niantsoantso ary malaza indrindra amin'ny ny lalao ny zana-borona izay fehezin'ny feo. Lalao amin'ny endriny mahazatra indrindra eto an-kianja, miaraka amin'ny fahasamihafana lehibe fa lalaovina tsy misy tananao ary miaraka amin'ny fampiasanao ny feonao hikirakira ilay sipa finamanana.
MangatsiakaAhoana no mety hitranga raha tsy izany, azontsika atao ny misintona azy mivantana sy maimaim-poana amin'ny Google Play Store, fivarotana fampiharana ofisialy ho an'ny Android. Ny hany lesoka azoko natao hialana amin'ity lalao ity dia, raha misy zavatra manokana momba an'io, dia ilay hafa tanteraka amin'ny lalao sehatra hafa ho an'ny Android, dia isaina ve izany, noho ny tsiroko amin'ny fanaovana dokambarotra be loatra ary eo amin'ny toerana ratsy toerana ambony.
Ny fanesorana an'io amin'ny doka izay ho ahy dia tena zava-dehibe satria manakana antsika betsaka amin'ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny lalao izany, ny marina dia Chicken Scream dia lalao mahafinaritra indrindra ho an'ny Android na dia tsy mety amin'ny filalaovana imasom-bahoaka aza izany, dia holazaiko aminao izao fa tsy hafa noho ny fomba hifehezana ilay akoho tsara io miaraka amin'ny zava-misy tsotra amin'ny fampiasana ny feontsika.
Ny fahasamihafana lehibe amin'ny Chicken Scream dia mitoetra amin'ny filalaovany, mihoatra lavitra noho ny lalao izay tsy inona fa sehatra mahazatra ho an'ny Android, ny fahasamihafana lehibe dia mitoetra ao ny fomba tsy maintsy hifehezana ny toetran'ny lalao video.
Mba hamindrana ny zana-borona amin'ireo ambaratonga sy tontolo samihafa tafiditra ao amin'ilay lalao maimaim-poana dia tsy maintsy atao ara-bakiteny isika hum, mihira na mibitsibitsika fotsiny amin'ilay zana-borona, amin'ity fomba ity dia handroso ny zazakely amin'ny alàlan'ny fandehanana amin'ilay ambaratonga mifanaraka amin'izany amin'ny fomba mitovy amin'izany rehefa mandeha.
Hitsambikina na hihoatra ireo sakana samihafa Tsy maintsy hitranga izany atsangano ny feontsika fehezinay ny akohoRaha miresaka aminy isika dia tsy maintsy miteny mafy kokoa ary raha mihomehy na mihira aminy isika dia tsy maintsy atao mafy kokoa ka mankatoa antsika ilay zana-borona ary mitsambikina ny sakana mifanandrify aminy, hantsam-bato sns.
Tsotra izany fa miaraka amin'izay ny mahafinaritra ny fomba ifandraisana amin'ity vaovao ity Ny lalao Android izay tato ho ato dia mamely azy amin'ny tambajotra sosialy samihafa.
Sintomy ny Chicken Scream maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Developer: Lalao Tap tanteraka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Chicken Scream, ny lalao zana-borona izay fehezin'ny feonao ary mamely azy amin'ny Android
Spotify dia manampy ny "Behind The Lyrics" ho an'ny fampiharana Android